China ifektri ukukhiqizwa ingxenye yesimo ifektri abakhiqizi Zhenyuan
Izici zobuchwepheshe nokumisha: Umshini womhlangano weSKHZ-B nc H-beam
1. Indlela yokukhiqiza yokushisela i-H-beam ukubeka i-h-beam ngokuya ngesimo se- "Work" kanye ne-weld amalunga amabili ekhoneni ezinhlangothini zombili ngasikhathi sinye, okwandisa kakhulu ukusebenza kahle kwe-welding.Ngenxa yokushisela okuhambisanayo, iwebhu empeleni ayikhubazekile ngemuva kokushisela.
2. Umshini wama-Orthotic oqonde okomshini wensimbi oqonde ngqo we-flange ungalungisa ngqo i-Angle deformation yensimbi yensimbi engu-H eshisayo ebunjiwe ngemuva kokushisela nge-eccentric press roller, eyehlisa amandla okuqondisa futhi ithuthukise ukunemba kokuqonda.
3. Ngokombono wezincazelo zensimbi, imininingwane yokushisela i-H-beam yiyona enkulu kunazo zonke eChina, futhi izinkomba zomugqa wokukhiqiza wokushisela we-h-beam wenkampani yokukhiqiza imishini ye-h-beam ehamba phambili kakhulu (i-ESAB Company) phesheya ngokufanayo.
4. Ngendlela yokuhlangana nokwakhiwa, ukuhlanganiswa komhlangano nokwakhiwa kwamukelwa, okunciphisa inqubo yokusebenza futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza.
5. Kumodi yokugxilisa i-web ne-flange plate, amasethi amabili emodi yokugxilisa ngaphambili nangemuva ayamukelekelwa ukuthuthukisa ukunemba kokuma.
6. Isiphakeli sezintambo sithambile sixhunywe nesibhamu se-welding futhi i-Welding Angle yesibhamu se-welding ingalungiswa.
7. I-weld fillet enkulu, esebenzisa amandla aphindwe kabili (DC + AC) ucingo oluphindiwe, i-arc ephindwe kabili, inqubo yokuwelda yamachibi amabili.Lezi zici zalayini wokukhiqiza zingezokuqala ngohlobo lwazo eChina.
8. Ukulawulwa kwe-PLC okungenisiwe, okuthembekile, okulula ukukuhlela.
9. Esiteshini esifanayo, ukuqedwa okuqhubekayo kwe-h-beam enqubeni yokukhiqiza yokwakhiwa, i-welding, i-orthopedics, ukuphakamisa, ukukhipha nezinye izinqubo.
Khj-c ovundlile flange corrector
I-Skhj-c calibrator evundlile isetshenziselwa ukulinganisa i-flange yensimbi ye-H. Ngemuva kokuthi i-H-beam iqedele inqubo yokushisela, ipuleti lephiko le-h-beam lizokhubazeka ngaphansi kwesicelo sokushisela isicelo, futhi kufanele lilungiswe ngaphambi kwalo Le mishini isetshenziselwa ukulungiswa kwephiko lephiko le-h-beam ne-T-beam ngemuva kokushisela.
Eminye imishini imi kanje:
Lawula umshini wokusika / umshini wokusika ibha oqonde ngqo ngamakhanda amaningi, umshini wokusika wensimbi we-CGL-4000 / SECTION, umshini wokusika we-KT-462 / semi-othomathikhi, umshini wokusika we-CG2-150B / wokukopisha, umshini wokusika we-KG-30 / CNC osabalalayo umshini wokubhola, 7-3040 * 16 / Umshini wokusika amasondo kaMagnetic, i-SAG- / lathe, i-CA6140 / imishini yokugaya, umshini we-ZX-32 / wokuxhumanisa, umshini wokusika umugqa we-Intersecting, BH6070 / Vertical press, Ya32-31 / cindezela ovundlile, umshini wokugunda we-plate-315 / ipuletiJz016-250 / umshini wokugaya wokugcina we-TXSOB / GD-20 / Magnetic electric drill RD-32A / DC welder AX5-50 / AC welder BXI-500 / C02 welder YM-500KR / i-arc efakiwe umshini Welding NZA-1000 / electrode omiswe ibhokisi HY704-4
- 50 / flux omisa ihhavini HI / 4 l - 20 ama-air air compressor / udizili, 200 kw / sandblasting machine PBS - 100 r / umshini wokufafaza ngopende GPQ9C / imfoloko iloli b / trigger CDWllHNC CPQ - 1-50 * 2500 / iwelding roller ifreyimu HGZ - 5 a / flange straightening machine YTJ 50 / ultrasonic flaw detector ECHOPE220 / digital temperature meter RKCDP - 500 / paint film thickness gauge 345 fb '- MK Ⅱ / digital clip-on ammeter 2003 / lokushisa kanye nomswakama imitha WHM5 / ukuhlolwa kwe-weld irulaSK / kazibuthe kuyizinhlayiyana iphutha umtshina DA-400S / vernier caliper.
Ukuzisika kwe-CNC kwezinto zokusetshenziswa → ukuhlanganiswa kwezinto → i-welding → ukulungiswa → ukwelashwa ebusweni → ukudweba
Isimo Sokukhiqiza 1
Isimo Sokukhiqiza 3
Isimo Sokukhiqiza 2
Isimo Sokukhiqiza 4
Langaphambilini Uhlelo lwe-Rack
Olandelayo: Ukuboniswa okuyingxenye kwemikhiqizo yenkampani
Ukwakhiwa Kwendawo Yefektri
Izigaba Zabasebenzi Nokuhlelwa Kokwakhiwa